UkuJongwa koXwebhu lweLizwi kunye nendlela yokuTshintsha phakathi kwabo
Ukuba ungumsebenzisi weLizwi, uyazi ukuba ukujonga uxwebhu lwakho ngeendlela ezahlukeneyo kunokukunceda uqonde ukuba umsebenzisi wokugqibela uza kubona ntoni. ILizwi 2019 linokubonisa uxwebhu lwakho kwenye yeembono ezintlanu, ezinokukunceda uqonde ngcono ubeko, imida, kunye nokwaphuka kwiphepha kuxwebhu lwakho:
Indlela yokufunda: Bonisa iphepha elifuna ukuba ulilayishe ngokuthe tye ukujonga amaphepha akufutshane.
Ubeko Loshicilelo: Veza ikhefu lephepha njengemivalo emnyama engqindilili, ukuze ubone ngokucacileyo ukuba iphepha liphela kwaye liqala phi. (Lo ngumbono omiselweyo.)
Ubeko lwewebhu: Veza uxwebhu lwakho kanye ngendlela oluya kubonakala ngayo ukuba ulugcine njengephepha lewebhu.
Ulwandlalo: Bonisa uxwebhu lwakho njengolwandiso lwezihloko kunye nemixholwana.
Uyilo: Bonisa uxwebhu ngaphandle kwemida ephezulu okanye esezantsi yephepha kunye nekhefu lephepha njengemigca echaziweyo.
Ukutshintsha phakathi kweembono kwiLizwi 2019
IMicrosoft Word ikunika iindlela ezimbini zokutshintsha phakathi kweembono ezahlukeneyo zoxwebhu:
Cofa ii icon zokujonga kwikona esezantsi ekunene kwefestile yoxwebhu lwakho.
Iimpawu kuphela zokujonga kwikona esezantsi ekunene kwefestile yoxwebhu yiMowudi yoFundo, uLwakhiwo lwePrinta, kunye nobeko lwewebhu.
Cofa ku Jonga ithebhu kwaye ucofe umbono ofuna ukuwusebenzisa, njengoPrinta Ubeko okanye uYilo loyilo.
UkuJongwa koPapasho lokujonga kunokukunceda uhlele kwaye wenze uyilo lwamaphepha akho, kubandakanya imida yamaphepha kunye neentloko kunye neenyawo. Ukuba ufuna ukugxila ekubhaleni kwaye ungawuboni umda wephepha lakho okanye iintloko kunye neenyawo, unokonwaba ngokutshintshela kumbono woyilo endaweni yoko. Iimbono ezimbini ezingaqhelekanga ziMowudi yoFundo kunye neembono zeNgcaciso.
ipilisi engqukuva emhlophe m 15
Sebenzisa ukujonga imowudi yokufunda kwiLizwi 2019
Imo yokuFunda inokuba luncedo ekwenzeni ukuba kube lula ukufunda isicatshulwa ngendlela nje oya kuyibona ngayo ukuba iyincwadi. Ukuvula amaphepha oxwebhu aboniswe kwimowudi yokufunda yeNdlela, cofa iKhonkco elidlulileyo okanye i icon elandelayo yeScreen kwicala lasekhohlo nasekunene kwesikrini, ngokulandelelana.
Ukujonga imowudi kukuvumela ukuba ufunde uxwebhu ngohlobo lwencwadi evulekileyo.
Ukuphuma kwiMowudi yokuFunda, khetha enye yezi zinto zilandelayo:
Cofa indawo yokuPrinta okanye ubeko lwewebhu icon kwikona esezantsi ekunene kwesikrini.
Sebenzisa ukujonga okucacileyo kwiLizwi 2019
Ukujonga ulwandlalo Yahlula uxwebhu lube ngamacandelo achazwe ngezihloko kunye nesicatshulwa. A isihloko ibonisa uluvo oluphambili. Isicatshulwa sinomhlathi omnye okanye nangaphezulu ancanyathiselwe umxholo othile. A umxholo kukuvumela ukuba wahlule umbono ophambili (isihloko) kwiindawo ezininzi. Isishwankathelo esiqhelekileyo sinokujongeka ngoluhlobo.
Isishwankathelo esiqhelekileyo sinezihloko, izihlokwana, kunye nesicatshulwa onokuthi usandise okanye uwe phantsi ukufihla izihlokwana okanye isicatshulwa.
idrama ye-zofran yabantwana
Ngaphakathi kwimbonakalo yoLwandiso unokwenza oku kulandelayo:
Ukuwa kwezihloko ukufihla iinxalenye (izihlokwana kunye nokubhaliweyo) okwethutyana kwimbonakalo.
Hlela izihloko ukuhambisa izihlokwana kunye nokubhaliweyo ngokulula ngaphakathi kuxwebhu olukhulu.
Ukuhambisa isihloko ngokuzenzekelayo kususa zonke izihlokwana kunye nokubhaliweyo. Endaweni yokusika nokuncamathisela imihlathi emininzi, ukujonga inkcazo kukuvumela ukuba uphinde uhlele uxwebhu ngokuhambisa nje izihloko.
Ukutshintshela kuJonga loLwandlalo, cofa kwithebhu yokujonga kwaye ucofe i-icon yolwandlalo.
Ukuchaza isihloko kwiLizwi 2019
Umboniso wolwandlalo uthatha umgca ngamnye njengesihloko okanye isicatshulwa. Ukuchaza umgca njengohlobo lwesihloko (iNqanaba 1 ukuya kwiNqanaba 9) okanye isicatshulwa, qiniseka ukuba utshintshele kulwandiso lokujonga kwiLizwi emva koko ulandele la manyathelo:
iziyobisi com finder
Hambisa isikhombisi kumgca ofuna ukuwuchaza njengesihloko okanye isicatshulwa.
Cofa kwibhokisi yoluhlu lweNqanaba leNkcazo kwaye ukhethe inqanaba lesihloko, njengeNqanaba 2.
ILizwi libonisa izihloko zenqanaba 1 ngohlobo olukhulu oluchanekileyo kwimida esekhohlo. Inqanaba lesihloko lesi-2 livela kuhlobo oluncinci olungene kancinci ngasekunene, izihloko zeNqanaba lesi-3 zivela kuhlobo oluncinci olungene kude ngasekunene, njalo njalo.
Amanqanaba asithoba esihloko akhona.
Ukwenza isihloko ngokukhawuleza, susa isikhombisi esiphelweni sesihloko esele sikhona kwaye ucofe u-Enter ukwenza isihloko esifanayo. Umzekelo, ukuba ubeka isikhombisi ekupheleni kwesihloko seNqanaba 3 kwaye ucinezela u-Enter, iLizwi lenza isihloko esitsha esingenanto seNqanaba 3.
esona sifo siphezulu sili-10
Ukunyusa kunye nokudodobalisa isihloko kwiLizwi 2019
Emva kokuchaza isihloko (esifana neNqanaba loku-1 okanye iNqanaba lesi-3 isihloko), ungasoloko utshintsha inqanaba, njengokutshintsha iNqanaba 1 ukuya kwisihloko sesi-2 okanye ngokuchaseneyo:
Xa uphakamisa isihloko ukusuka kwinqanaba elinye ukuya kwelinye (njengakwinqanaba lesi-3 ukuya kwinqanaba lesi-2), kunjalo ukunyusa .
Xa usithoba isihloko (njengeNqanaba 4 ukuya kwiNqanaba 5), ​​kunjalo ukuthoba phantsi.
Isihloko seNqanaba 1 asinakuphakanyiswa kuba iNqanaba 1 sesona sihloko siphezulu. Ngokunjalo, isihloko seNqanaba 9 asinakususwa kuba iNqanaba 9 sesona sihloko sisezantsi.
Ukunyusa okanye ukubeka ezantsi isihloko kwinqanaba elithile kwiLizwi, landela la manyathelo:
Usebenzisa imouse okanye ikhibhodi, hambisa isikhombisi kwisihloko ofuna ukusiphakamisa okanye ukusihlisa.
Khetha enye yezi ndlela zilandelayo:
Cofa kwibhokisi yoluhlu lweNqanaba leNkcazo kwaye ucofe inqanaba (njengeNqanaba 2).
Cinezela iThabhu ukunciphisa isihloko okanye iShift + Tab ukunyusa isihloko.
Cofa kwiPromote okanye yehlisa itolo.
Hambisa isikhombisi semouse ngaphezulu kwesangqa esibonakala ngasekhohlo kwesihloko, bamba iqhosha lasekhohlo le mouse, utsale imouse ekunene okanye ekhohlo, emva koko ukhulule iqhosha le mouse lasekhohlo.
Ukunyusa okanye ukunciphisa isikhundla isihloko ngokuzenzekelayo sikhuthaza okanye sinciphise nasiphi na izihlokwana okanye isicatshulwa esiqhotyoshelwe kwisihloko esinyusiweyo okanye esincitshisiweyo. Ngale ndlela izihlokwana okanye isicatshulwa sigcina ubudlelwane obufanayo nesihloko.
Ukuhambisa izihloko phezulu nasezantsi kwiLizwi 2019
Ungasa iintloko phezulu okanye ezantsi kuxwebhu. Ukuhambisa isihloko, landela la manyathelo:
Cofa u-Nyusa phezulu okanye ushenxise ii-icon zetolo kwithebhu yokuKhangela.
Cinezela Alt + Shift + ↑ okanye Alt + Shift + ↓.
Hambisa isikhombisi semouse ngaphezulu kwesangqa esibonakala ngasekhohlo kwesihloko, bamba iqhosha lasekhohlo le mouse, tsala imouse phezulu okanye ezantsi, emva koko ukhulule iqhosha le mouse lasekhohlo.
Ukudala isicatshulwa kwiimowudi zokujonga zeLizwi
Isicatshulwa sinokuqulatha isivakalisi esinye, izivakalisi ezininzi, okanye imihlathi eliqela. Okubhaliweyo kuhlala kubonakala kungaphakathi kumxholo (okanye kumxholwana). Ukwenza isicatshulwa kwiimowudi zokujonga iLizwi, landela la manyathelo:
iziphumo ebezingalindelekanga zethamo eliphezulu lomkhuhlane
Hambisa isikhombisi esiphelweni sesihloko okanye kwisihlokwana.
Esi sisihloko (okanye isihlokwana) isicatshulwa sakho esiya kuthi siqhotyoshelwe kuso ukuba usisa isihloko (okanye isihlokwana).
Igama lenza isihloko esingenanto.
Cofa kwiDemote kwiTekisi ebhaliweyo yomzimba (utolo oluphindwe kabini olukhombe ngasekunene) okanye ucofe kwibhokisi yoluhlu lweNqanaba loLwandlalo uze ukhethe Umbhalo woMzimba.
ILizwi libonisa indawo yebhulethi, ebhalwe ngaphakathi ngaphantsi kwesihloko osikhethileyo kwiNyathelo 1.
Chwetheza isicatshulwa sakho.
Ukuwa kunye nokwandisa izihloko kunye nezihlokwana kwiiMbono zeLizwi
Ukuba isihloko okanye isihlokwana siqukethe nasiphi na isihlokwana okanye isicatshulwa esingezantsi, ungawa umxholo lowo. Ukuwa isihloko sifihla ngokulula nasiphi na isihlokwana esine-indent okanye isicatshulwa kwimbono okwethutyana. Ukwandisa isihloko sibonisa nasiphi na isihlokwana okanye isicatshulwa esasifihliwe ngaphambili.
Ukuwisa isihloko kunye nayo yonke imixholwana okanye umxholo womzimba ongezantsi kwayo, cofa kabini (kunye) icon ebonakala ngasekhohlo kwesihloko.
Ukuba ufuna ukuwa phantsi kwesihlokwana okanye umxholo womzimba ovela ngezantsi kwesihloko kwiLizwi, khetha enye yezi zilandelayo:
Hambisa isikhombisi naphi na kwisihloko ofuna ukuwa kuso, emva koko ucofe i-Collapse (minus sign) icon.
Cinezela u-Alt + Shift + + (kunye nokudibanisa uphawu).
Ukwandisa isihloko esiwileyo ukuveza zonke izihlokwana kunye nomzimba wombhalo, cofa kabini i icon yokudibanisa ebonakala ngasekhohlo kwesihloko.
Ukuba ufuna nje ukwandisa umxholo omncinci okanye umxholo womzimba kwangoko ngezantsi kwesihloko esiwile, khetha enye yezi zilandelayo:
Hambisa isikhombisi naphi na kwisihloko ofuna ukusandisa, emva koko ucofe i-Yandisa i icon (uphawu lokudibanisa ngaphakathi kwesangqa).
Cinezela Alt + Shift + - (iqhosha lokususa uphawu).
yeyiphi amandla engena ngeparcocet
Isisombululo se-saline se-nebulizer phezu kwekhawuntari
Inceda ntoni i-tylenol
ukutya okuthambileyo ukutya emva kotyando
ungathatha i-zyrtec ngelixa uncancisa
ngaphezulu kwamayeza e-counter ye-bacterial vaginosis